अपहरण आरोप लागेका पंकजले भने, 'म नेपाली नागरिक हुँ, गुलरिया मेरो घर हो, मलाई फसाइयो'
शुक्रबार, जेठ १३, २०७९ सन्दिप नाथ योगी
सन्दिप नाथ योगी, अनोज थारु, बाँके । बाँकेको नेपालगन्जमा रहेको स्टारलाइट क्यासिनोबाट बिक्की भनिने अतीत खानको अपहरण गरेको आरोप लागेका पंकज श्रीवास्तवले नेपालकागज सँग सम्पर्क गर्दै आफुलाई फसाइएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालकागजलाई आफ्नो नेपाली नागरिकताको फोटो पठाउनुभएको छ ।
उहाँले आफुले बिक्की भनिने अतीत खानको अपहरण गरेको नभई प्रहरीलाई बुझाउन लगेको बताउनुभएको छ । उहाँले आफु फसेको दाबी गर्नुभयो ।
कानुनलाई आफ्नो हातमा किन लिएको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, "हो म बाट गल्ती भएकै हो, आवेगमा आएर भएको घटना हो तर बाहिर आए जस्तो बिक्की असल म खराब भने होइन ।"
उहाँले बिक्की क्यासिनोमा लगानी गर्ने मिटरब्याजी भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले दाबी गर्दै भन्नुभयो, "बिक्की भनिने अतीत खान भारतको नामुद गुण्डा हो, त्यसका २-३ वटा केसहरु भारतमै छन । उ अहिले भागेर नेपाल आएको हो । उ गुण्डानै हो । क्यासिनोमा खेल्न आउने मान्छेलाई मिटरमा ब्याज दिने ब्यक्ति कहिँ दुधले धोएको हुन्छ ?"
अनि तँपाइले दिनदहाडै मान्छे अपहरण गर्न पाउनुहुन्छ ? किन अपहरण गर्नुभयो ? गोली ठोक्छु भन्न पाइन्छ ?
हेर्नुहोस क्यासिनो भित्र बाहिर सिसि टिभी क्यामेरा हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यदि मैले उसलाई अपहरण गर्नुपर्ने थियो भने क्यामेराको अगाडि अथवा भनौँ त्यतिका मानिसको अगाडि त अपहरण गर्दैनथे होला । त्यो घटना कुनै प्लानिङ नबनाएर आबेग र उत्तेजनामा आएर भएको हो । म कुनै अपराधी होइन म व्यवसायी हुँ । म नेपाली नागरिक हुँ । मेरो घर बर्दियाको गुलरियामा छ । म तँपाइलाई मेरो नगरिकताको फोटो पठाउँछु ।
अपहरण किन गर्नुभयो ? कानुन छैन ?
हेर्नुहोस बाहिर आए जसरी यो घटना भएकै होइन । बिक्की भनिने अतीत खानले मेरो श्रीमतीलाई रातीको १२ बजे फोन गर्ने, चाहिने नचाहिने कुरा गर्ने गर्दथ्यो । मैले ब्यक्तिगत रुपमा उसलाई चिनेकै छैन ।
अनि मेरो श्रीमतीलाई रातिराती फोन गर्ने मेसेज गर्ने गरेपछी मैले एकदिन उसँग कुरा गरेँ । उसले मलाई धम्की दियो अनि मैले रिसमा आएर उसलाई क्यासिनोबाट तानेर गाडिमा हालेँ र वडा प्रहरी कार्यालयमा लगेर बुझाएँ । यहिँ नीर मेरो गल्ती भएको हो तर म अपराधी होइन । मबाट रिसमा यस्तो गल्ती हुन गएको हो ।
तपाईंले गाडीमा हालेर मान्छेलाई जंगल तिर किन लग्नुभयो ?
तपाईंले अनुसन्धान गर्नुस पहिला । म स्टारलाईट क्यासिनोको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको अन्तिम भिडियो क्लिपको समय र वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जमा देखिएको समयको डिफ्रेन्स (अन्तर) निकाल्नुस । १८ मिनेटको ग्याप (अन्तराल) छ ।
मैले राप्ती नदिमा उसलाई लगेर गएर फर्कँदा कम्तिमा डेढ देखि दुई घण्टा लाग्छ । म १८ मिनेट भित्रमा वडा प्रहरी पुगेको छु । तपाईं निस्पक्ष भएर प्रश्न सोध्नुस । बायस (पक्षपात) नहुनुस ।
उसो भए तपाईं चोखो हुनुहुन्छ त ? तपाईंको गल्ती छैन ?
हो मेरो गल्ती भयो । म त्यो गल्तीको दोषी छु । मैले त्यसो नगरेको भए हुनेथियो । तर म अपराधी होइन । म कसैलाई किडन्याप(अपहरण) गर्ने मान्छे होइन । म शुद्ध व्यवसायी हुँ । मैले गरेको गल्तीको म दोषी हुँ तर मान्छे मार्न सक्ने ब्यक्ति होइन ।
अहिले मेरो इमेज जुन हिसाबले बाहिर देखिएको छ त्यस्तो ब्यक्ति म होइन । मेरो श्रीमतीलाई राती राती फोन गरेपछी मलाई रिस उठ्यो । रिसको झोँकमा गल्ती भयो । तर मैले सुनुयोजित ढंगमा घटना घटाएको होइन ।
प्रहरीसँग मेरो नाम जोडेर बाहिर आयो । मलाइ धेरै दुख लागेको छ । महिलासँग (श्रीमती) जोडिएको केस भएकाले प्रहरी अलि संवेदनशील भएको हो । तर प्रहरीले हामीले मिल्छौँ भनेपछि मिलापत्र गराएको हो । तपाईंले मेरो कुरा, मेरो भनाइ राख्दिनुहोला नडराएर ।
पंकज श्रीवास्तवले आफ्नो नागरिकताको फोटो तथा आफ्नो श्रीमतीलाई बिक्कीले फोन गरेको भन्दै दाबी गरिएको फोन लगको स्क्रिनशट पठाउनुभएको छ । हामीले उक्त फोन लगमा सेभ भएको नाममा देखिएको नम्बर 'बिक्की' अतीत खानको हो वा होइन भन्ने स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि गर्न नसकेकाले गोपनियताको ख्याल राख्दै उक्त स्क्रिनशट प्रकाशित गरेका छैनौँ । उक्त नम्बर हाल स्विच अफ छ ।
उहाँले पठाएको नागरिकतामा नाममा पंकज श्रीवास्तव, ठेगानामा गुलरिया -११ बर्दिया, जन्म मिति २०४५/२/१५, बाबुको नाम/थर शोभाकान्त श्रीवास्तव, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर ६५३००१/२५३७ नागरिकताको किसिम वंशज लेखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाबाट नागरिकता जारी भएको छ । उहाँले दिएको नागरिकताको प्रतीको अनुसन्धान गर्दा उहाँ नेपाली नागरिक रहेको देखिन्छ ।
यता बिक्की भनिने अतीत खानले पंकज श्रीवास्तव, अनुराग शाह, सुरेस कुर्मी, अस्विनी सिंह र नाम नखुलेका अर्का एकजना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा अपहरण तथा शरीर बन्धक र डाँका चोरी मुद्दामा जाहेरी दर्ता गराउनुभएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले उक्त मुद्दाको प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै हामिले बिक्की भनेर चिनिने अतिक खानसँग पनि सम्पर्क गरेका थियौँ । पंकजले नै बिक्कीको नम्बर उपलब्ध गराउनुभएको थियो । बिक्कीको नम्बर भनेर दाबी गर्दै पंकजले दिएको नम्बरमा हामिले सम्पर्क गरेका थियौँ । उक्त नम्बर स्विच अफ छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १३, २०७९, १८:४६:००